उपनिवेशहरू र अर्ध उपनिवेशहरूका निम्ति माओव्दारा विकसित क्रान्तिको मार्ग – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
१. “ चीनीयाँ जनताले लिएको बाटो …….त्यो बाटो हो, जुन घेरै उपनिवेश र अरूमा आश्रित देशहरूले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र जनताको जनवादका लागि संघर्षमा जनताद्धारा अवलम्न गरिनु पर्दछ ।”
३. “राष्टिय मुक्ति संघर्षको विजयी प्रतिफलका लागि एउटा निर्णायक अवस्था जब आवश्यक आन्तरिक परिस्थितिले यसलाई अनुमति दिन्छ,, यो भनेको कम्युनिष्ट पाटीको नेतृत्व अन्तरगत जनताको मुक्ति सेनाहरूको गठन हो ।”
माओले संयुक्त मोर्चाको बुझाइमा पनि विकास गरे जुन लेनिन र स्तालिनले अगाडि बढाएका थिए । माओले देखाए कि उपनिवेशहरू र अर्ध–उपनिवेशहरूमा पुँजीपति दुई भागमा विभाजित हुन्छन् – दलाल पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीपति । दलाल पुँजीपति, जो उसको अस्तित्व र वृद्धिका लागि साम्राज्यवादमा भर परेको हुन्छ, सधैभरी क्रान्तिको एउटा शत्रु भएर रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजीपति, क्रान्तिका लागि एउटा पेण्डुलमजस्तो अस्थिर मित्र हो, जो कहिलेकाही क्रान्तिमा मद्तगार हुन्छ र कहिलेकाही शत्रुहरूसित मिल्न जान्छ । यसरी सर्वहाराको नेतृत्व अन्तरगत संयुक्त मोर्चाले चार वर्ग एलाइन्स– सर्वहारा, गरीव तथा मध्यम वर्गी किसानहरू , शहरी निम्न पुँजीपति समाहित गर्दछ । क्रान्तिका शत्रुहरू भनेका साम्राज्यवाद, दलाल पुँजीपति र ठुला–ठुला जमिन्दारहरू नै हुन ।
माओका अनुसार उपनिवेशहरू र अर्ध–उपनिवेशहरूमा हुने क्रान्तिले रसियन क्रान्तिद्धारा गरिएजस्तो विद्रोहको मार्ग अपनाउने छैन्, जहाँ प्रमुख शहरहरू पहिले क्याप्चर गरिए र अनि गाउँहरूमा नियन्त्रण गरिए । उनले रक्षात्मक जन युद्धको चीनीयाँ मार्ग देखाए जसमा गाउँहरूमा स्थापित प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बल प्रयोगव्दारा खोस्ने महत्वपूर्ण काम संलग्न हुन्छ, त्यसमा गुरिल्ला क्षेत्रहरू र आधार इलाकाहरूको निर्माण गर्ने र अन्त्यमा घेरावन्दी गर्दै शहरहरूलाई नियन्त्रण लिने प्रकृया हो । यो प्राप्त गर्न माओले क्रान्तिकारी युद्धका सैनिक सिद्धान्तहरू तयार पारे । उनले लाल सेना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सिकाए, जुन क्रान्तिको एउटा पूर्णत आवश्यक हतियार थियो । गुरिल्ला युद्धकौशलबाट सुरू गर्दै र अनि चलायनमान युद्धकौशल र अन्त्यमा एकै ठाउँ अडिएर लडने युद्धकौशलको विकास गरे । माओ जसले एउटा सानो फौजले एउटा भयानक शत्रुलाई हराउन आवश्यक फौजीशक्ति निर्माण गर्न विशाल जनसमूहमा कसरी भर पर्न सक्छ भन्ने देखाए ।
यस्तो राज्य जनताको जनवादी अधिनायकत्वको रूपमा चीनीयाँ क्रान्तिको विजयपछि स्थापित गरियो । माओले जनताको जनवादी अधिनायकत्वको महत्व दुई पक्षहरू– जनताका लागि जनवाद र प्रतिक्रियावादीहरूमाथि अधिनायकत्वको मिसावटका रूपमा वणर््ान गरेका छन् । जनता भनेका मजदुर वर्ग, किसान, शहरी निम्न पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् । मजदुर वर्ग र कम्युनिष्ट पार्टीद्धारा नेतृत्व गरिएका यी वर्गहरूले उनीहरूको आफ्नो राज्य बनाउन एकता गर्दछन् र तिनीहरूको आफ्नो सरकार निर्वाचन गर्दछन्; तिनीहरूले उनीहरूको अधिनायकत्व साम्राज्यवादका भुष्या कुकुरहरू– जमिन्दार वर्ग र नोकरशाही दलाल पुँजीपतिका साथै ती वर्गहरूका प्रतिनिधिहरूमाथि निर्णयलाई पालन गर्न वाध्य गराएर लगाउ‘दछन् ।